Fanabeazana : Ampy izay ny rafi-pampianarana tsy nahomby -
AccueilRaharaham-pirenenaFanabeazana : Ampy izay ny rafi-pampianarana tsy nahomby
Ny tontolon’ny fanabeazana no nitondran’ny Filoham-pirenena famelabelarana, nandritra ny fandaharana “Fotoam-bita”, farany teo. Iankinan’ny ain’ny fampandrosoana ny firenena ny fanabeazana , hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina, ka tokony homen-danja mba tena hiantraika any amin’ny vahoaka ny tombontsoa azo avy amin’izany.
Tsapany, fa tena mila fanavaozana lalina ity sehatra ity. Toa tsy nahitana fampandrosoana mivantana tany amin’ireo zanaka Malagasy mantsy ny rafi-pampianarana teto hatramin’izay. Sahirana mihitsy ny zanaka Malagasy iray vao mba tafavoaka amin’ny fiainana, na dia manana diplaoma aza, noho izay rafi-pampianarana tsy mahomby nampiharina teto izay.
Vonona hitondra fanovana tanteraka amin’ny lafiny fanabeazana tena mahomby ny Filoham-pirenena, mba hahitan’ny zanaka Malagasy ny tombontsoa avy amin’ny fianarana norantovin’ny tsirairay.
“ Manomboka izao dia hahita ny anjara masoandrony amin’izay ireo zanaky ny sahirana. Taloha mantsy, dia zara raha afaka namita ny ambaratonga fototra fotsiny izy ireo. Ireo mba nanana diplaoma indray dia zara raha mahita asa na manao asa tsy sahaza azy. Ny mba mahitahita moa dia voatery miresaka amin’ny olona ambony na minisitra mba hidirana any anaty ministera any. Natao anarana fakana toerana fotsiny ny anarana sendikà na antoko hatramin’izay”, hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina.
Malaza ho manana avara-pianarana isika kanefa mbola izao foana no mahazo ny firenena, hany ka raha hiady hevitra momba ny fampandrosoana ny firenena aza mivaona tanteraka.
Raha ny marina, dia tokony ny olom-pirenena rehetra no mitondra fampandrosoana ny firenena amin’ny alalan’ny fianarana norantoviny. Tsy izany anefa no zava-misy. Toa mijanona ho enta-mavesatra ho an’ny firenena indray aza ireo mba noheverina fa ho avin’ny firenena noho ny tsy fahombiazan’izay rafi-pampianarana izay. “ Eo am-panarenana an’izay rafitra tsy nahomby nataon’ireo mpitondra nifandimby izay isika izao. Efa nisy ny natao ary mbola mitohy ny fanovana mahery vaika. Hanomboka amin’io taom-pianarana vaovao io ny fampiharana an’ilay Pse na politikam-pampianarana vaovao izay haharitra telo taona. Ho tsapan’ny tsirairay mihitsy ny lanjan’ilay fanovana mahery vaika aorian’izay”, hoy hatrany ny fanazavan’ny filoha.
Vaindohan-draharahan’ny filoham-pirenena tokoa ny fanarenana ny lafiny fanabeazana. Mpanabe rahateo izy ka nahatsapa ny hasarobidin’izany. Tao anatin’izay efa-taona izay, dia mpampianatra Fram aman’aliny no tafiditra ho mpiasam-panjakana. Efitrano fianarana miisa 2 607 no tafatsangana tao anatin’ity enim-bolana voalohany tamin’ity taona ity ary sekoly Epp miisa 1340 no nahazo “Cantine Scolaire”. “ Misy ny ezaka efa nataon’ny fanjakana ary mbola mitohy foana izany ezaka izany. Tsy ny any ambanivohitra ihany no nahazo Cantine Scolaire fa ny aty an-drenivohitra ihany koa. Manala ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny izany. Mikasika an’ireo mpampianatra Fram kosa dia mbola hitohy ny fikarakarana azy ireo. Tsy mijanona amin’ny fandraisana azy ho mpiasam-panjakana fa lehibe amin’izany koa ny fanofanana azy. Mitaky ezaka avy amin’ireo mpampianatra kosa anefa izany satria tsapa fa misy ny manao tandrevaka amin’ny ora ampianarana araka ny tatitra azo”, araka ny fanazavana nomen’ny filoha hatrany.
Mazava ny fanambarana an-gazety izay navoakan’ny seraseran’ny zandarimaria mikasika ny fanadihadiana natao tamin’ ilay mpanao gazety mpitondra tenin’ny MLE, fa tsy heloka an-gazety no nakana ambavany sy anton’ny fanadihadiana fa ny fanaovana fanamiana mpitandron’ny filaminana ...Tohiny